ရုရှားဝှက်ဖိုင်တွဲများ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Folders 5.6 Hide
M4A - လူအတော်များများမာလ်တီမီဒီယာကို formats ကော်ပိုရေးရှင်းက Apple ၏တဦးတည်း။ ဤ extension တွေနဲ့ဖိုင်က MP3 တစ်ခုတိုးတက်လာသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းအဖြစ်, iTunes ကိုအတွက်ဂီတကိုဝယ်ခြင်းငှါမရရှိနိုင်ပါကအသံဖမ်း M4A အသုံးပြုသည်။
ဒီပုံစံကိုအဓိကအား devices များရဲ့ Apple ကဂေဟစနစ်အဘို့အဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်းကြောင့်လည်း Windows ပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ MPEG-4 ကွန်တိန်နာဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအသံဖိုင်ထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောတကယ်တော့ဂီတ၏အဖြစ်ဒီကိစ္စကိုမီဒီယာပလေယာအမျိုးမျိုးဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ သူတို့ထဲကသောဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အသံ M4B format ကိုဖွင့်ပါ
Method ကို 1: iTunes ကို
M4A အသံသွင်းဝန်ဆောင်မှု Aytyuns များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းနေကြသည်ကတည်းကဒီအစီအစဉ်တွင်အတိအကျသူတို့ကိုဖွင့်ဖို့ယုတ္တိလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာ Start နှင့် menu ကိုဖြတ်သန်းသွား "File"-"စာကြည့်တိုက်မှဖိုင်မှတ်တမ်း Add ... ".
သငျသညျမြားကိုလညျးသုံးနိုငျ ကို Ctrl + အို.
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌ "Explorer ကို" လိုချင်သောလမ်းကြောင်းတည်ရှိသည်ရှိရာ directory ကိုသွားပါက select လုပ်ကိုနှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
ဒီ app ဂီတအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု, နှင့်သင့်လျော်သောအပိုင်းများတွင်ထည့်သွင်း "Mediateca" နှင့်၎င်း၏လယ်ပြင်၌ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီကနေသင်အသံဖိုင်၏အနုပညာရှင်, အယ်လ်ဘမ်နဲ့အရှည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, ကောင်းစွာ, သင့်လျော်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကစားရန်ကိုမလိုလား။
ကခစျြစနိုးလူသိများသည်အသုံးပြုသူများဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် "တူနာ" သူကပြောတယ်အဆင်ပြေတလက်ပေါ်, အခြား - on သင်က Apple ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးမပြုခဲ့ကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, အရန်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါဟာ iTunes ကို၏မျက်နှာသာအတွက်ကပြောပါတယ်နဲ့ program ကို volume ထဲမှာပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်ဘူး။
Method ကို 2: လျင်မြန်စွာအချိန် Player ကို
အဖွင့် M4A နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လည်းသင်တန်းက Apple အနေဖြင့်အဓိကကစားသမား, ။
လျင်မြန်စွာအချိန် Player ကို Download လုပ်ပါ
Kviktaym ကစားသမား Start (ထိုအစီအစဉ်ကိုသေးငယ်တဲ့ bar မှာဖွင့်လှစ်ကြောင်းသတိပြုပါ) နှင့်မီနူးကိုသုံးပါ "File"selection ရသော "ပွင့်လင်းဖိုင်မှတ်တမ်း ... ".
အစဉ်အလာ, သော့ကိုပေါင်းစပ် ကို Ctrl + အို ဒါဟာတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အဆိုပါအမျိုးအစားမှဖြည့်စွက်ခြင်း, ဖွင့်လှစ် window ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ format ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်မှန်ကန်စွာ program နိုင်ရန်အတွက်ရှေးခယျြထားရမည်ဖြစ်သည် "အသံဖိုင်တွေကို".
သို့ပြုလျှင်သင်၏ M4A, က select လုပ်ပါရှိရာ folder ကိုလိုက်နာရန်နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
မှတ်တမ်းတင်ဖို့နားထောင်ဖို့, player ကြားခံ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်ပြဇာတ် button ကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလုံလောက်အောင်ရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာသူ့ရဲ့အသုံးပြုရန်တွေ့ခြင်း၏အချို့သောအချက်များ။ ဥပမာ, ဒီဇိုင်းနည်းနည်းခေတ်နောက်ကျကြည့်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအသံဖမ်းများအတွက်သီးခြား interface ကို၏အဖွင့်ကိုလူတိုင်းနှစ်သက်သောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြွင်းသောအရာ - တစ်ဦးအဆင်ပြေဖြေရှင်းချက်။
Method ကို 3: VLC Media Player ကို
အလွန့်အလွန်လူကြိုက်များ Multi-Platform ကို VLC player ကိုထောက်ခံကို formats ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကကျော်ကြားသည်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်နှင့် M4A ။
VLC Media Player ကို Download လုပ်ပါ
လျှောက်လွှာကို run ။ တစ်အချက်ကို Select လုပ်ပါ "မီဒီယာ"-"ပွင့်လင်းဖိုင်မှတ်တမ်း".
ကို Ctrl + အို ဒါ့အပြင်သူကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ရေး interface ကိုခုနှစ်, သငျသညျ play ချင် post ကို, မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းတွေ့ပါ "ပွင့်လင်း".
အဆိုပါ ul မှတဆင့်ဖွင့်လှစ်နောက်ထပ်ဗားရှင်းရှိပါတယ် - သူသည်သင်တို့ M4A အတွက်မျိုးစုံအသံရှိသည့်အခါများတွင်လာသည်။
ရွေးချယ်ထားသောဤအချိန်, "ပွင့်လင်းဖိုင်များ ... " သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် Ctrl + + အို Shift.
အဆိုပါ "Explorer ကို" သင် play ချင်သောမှတ်တမ်းများနှင့်စာနယ်ဇင်းကို select "ပွင့်လင်း".
သေတ္တာထဲတွင် "Sources" သူတို့ကသင်ရွေးချယ်ထားသောအပုဒ်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုနားမထောငျဖို့, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Play".
VLC Player ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်သူ၏အစုံစားသတ္တဝါများ၏မသာရေပန်းစားသည် - လူအတော်များများဟာသူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ သို့သျောလညျးကိုတောင်စိန်ချို့ယွင်းချက်များမှာဥပမာ - အဘို့, Als နှင့် DRM ဖြင့်ကာကွယ်ထားမကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းများနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 4: Media Player ကိုဂန္ထဝင်
အဆိုပါ M4A format နဲ့အတူ operated နိုင်သည့် Windows အတွက်နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့မီဒီယာပလေယာ။
Media Player ကိုဂန္ထဝင် Download
အဆိုပါကစားသမားကို run, select လုပ်ပါ "File"-"ပွင့်လင်းဖိုင်မှတ်တမ်း"။ သင်တို့သည်လည်းနှိပ်လို့ရပါတယ် ကို Ctrl + အို.
ပစ္စည်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ရလဒ်ဝင်းဒိုးကိုခုနှစ်တွင် "ပွင့်လင်း ... " ခလုတ်တစ်ခုရှိပါတယ် "ကိုရွေးချယ်ပါ"။ အဲဒါကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျမှတဆင့်ပြန်ဖွင့်ဘို့တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ရေး option ကိုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် "Explorer ကို"။ သင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုရိုးရှင်းသောများမှာ - သင်လိုအပ်သမျှနှင့်စာနယ်ဇင်းကို select "ပွင့်လင်း".
ကလစ်နှိပ်, အင်တာဖေ့၏ထို့အပြင်မှပြန်လာသော "အိုကေ".
အဆိုပါ MHC ကနေတဆင့်စံချိန်ကစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။
ဤအချိန်တွင်တံခါးသော့ကိုပေါင်းစပ်နှိပ် ကို Ctrl + Q ကို သို့မဟုတ် Menu ကိုအသုံးပြုဖို့ "File"-"အမြန်ဖိုင်ကိုဖွင့်လှစ်".
အဆိုပါ M4A format နဲ့ဟာ directory entry ကို Select လုပ်ပါ, ဖိုင်ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း", အလားတူပင်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Media Player ကိုဂန္ထဝင်များစွာအားသာချက်များနှင့်အနည်းငယ်အားနည်းချက်များကိုဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီအချက်အလက်များအရသိရသည်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌, developer များကဒီကစားသမားကိုထောက်ပံ့ရပ်တန့်သွားရသည်။ ဒီကျွမ်းကျင်သူ, သင်တန်း, ရပ်တန့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်လတ်ဆတ်ဆော့ဖျဝဲပိုနှစ်သက်သူကိုအသုံးပြုသူများကတွန်းလှန်ပေးနိုင်သည်။
Method ကို 5: KMPlayer
ယင်း၏ပြည့်စုံစွမ်းရည်ပေး Audio Player ကို KMPlayer လူသိများလည်း M4A format ကိုထောက်ခံပါတယ်။
KMPlayer ကို download လုပ်ပါ
လျှောက်လွှာစတင်ပြီးနောက်, တံဆိပ်ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "KMPlayer" အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်၌၎င်း, menu ကနေ select လုပ်ပါ "ပွင့်လင်း File (s) ... ".
Built-in ဖိုင်မန်နေဂျာအသုံးပြုခြင်း, directory ကိုမှ navigate နှင့်သင့် M4A-file ကိုဖွင့်လှစ်။
သင်တို့သည်လည်းရိုးရှင်းစွာ KMPleer ပြတင်းပေါက်သို့လိုချင်သောသီချင်းဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။
ပြဇာတ်အပေါ်အပုဒ်သွင်းထားဖို့ပိုပြီးခက်ခဲသည့်ကိစ္စနည်းလမ်း built-in သုံးပြီးကပါဝင်ပတ်သက် "File Manager က".
အဓိက application ကိုမီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ပွင့်လင်းဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို" သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကို Ctrl + J ကို.
ပေါ်လာပြတင်းပေါက်မှာလမ်းကြောင်းအတူ directory ကိုသွားပါနှင့်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူက select လုပ်ပါ။
developer များ၏မေးခွန်းထုတ်စရာဆုံးဖြတ်ချက်များကြော်ငြာထည့်သွင်းပြီးနောက်၎င်း၏အခွင့်အလမ်းများကိုနေသော်လည်း KMPlayer ပရိသတ်ကိုတစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါကစားသမား၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ဤအချက်ကိုအလေးထားပါ။
Method ကို 6: AIMP
ရုရှား developer များအနေဖြင့်ဤသည်ကစားသမားလည်း M4A format ကိုထောက်ခံပါတယ်။
Aimp ကို download လုပ်ပါ
အဆိုပါကစားသမားကိုဖွင့်။ ကလစ်နှိပ်ခြင်း "Menu ကို"ကို select "ပွင့်လင်းဖိုင်များ ... ".
ကိုမြင်လျှင်ပြတင်းပေါက် "Explorer ကို"အဆိုပါအကျွမ်းတဝင် algorithm ကိုတစ်လျှောက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက် - အလိုရှိသောဖိုင်တွဲကိုသွားပါကတစ်ဦးစံချိန်ကိုရှာဖွေပါက select လုပ်ကိုနှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
တစ်ဦးက window ကိုပြသစာရင်းအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အဆင်ပြေမှာပါခေါ်ရန်နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
စံချိန်ကစားခြင်းစတင်သည်။ Aimp လက်ရှိကစားဖိုင်၏ဂုဏ်သတ္တိများဖော်ပြရန်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
ကစားခံရဖို့သီခငျြးမြားကိုထည့်သွင်းဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ဒီဂျမှာတော့တစ်ခုလုံးကိုဖိုင်တွဲကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် - အသုံးဝင်သောသင် M4A format ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါအကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ဦးအယ်လ်ဘမ်ကိုနားထောင်ချင်သည့်အခါ။
ကစားသမားရဲ့ window ၏အောက်ခြေတွင်တစ်ဦးအပေါငျးလက်ခဏာအတူခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင့်အနေဖြင့်စာကြည့်တိုက်ဖို့ catalog interface ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Add".
သစ်ပင်အတွက်အလိုရှိသော directory ကို Select လုပ်ပါ, သည်၎င်း၏ checkbox ကို click နှိပ်ပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်တွဲစာကြည့်တိုက်ကို interface ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ သငျသညျရိုးရိုးသင့်လျော်သောသေတ္တာစစ်ဆေးနေကြောင်း folder ထဲမှာနှင့် folder ထဲမှာဖိုင်တွေကစားနိုင်ပါတယ်။
AIMP - ကောင်းတစ်ဦးနှင့်အစွယ်စုံကစားသမားပေမယ့် developer များ၏အဆင်ပြေစေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုယဇ်ပူဇော်ယူဆောင်: window ကိုအလုပ်လုပ်ပရိုဂရမ်ကိုသာ A မြင့်ဆုံးသို့မဟုတ် tray မှ minimize, ထိုသို့အလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်များစွာသောအသုံးပြုသူများကပြုလုပ်အတူတက်ထားရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်။
Method ကို 7: Windows Media Player
built-in operating system ကို Microsoft ကမီဒီယာပလေယာကနေလည်း extension ကို M4A နှင့်အတူဖိုင်တွေအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုကစားရန်တတ်နိုင်သည်။
Windows Media Player ကို Download လုပ်ပါ
Windows Media Player ကိုဖွင့်ပါ။ အဆိုပါ tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြသမှု"ပုံရိပ်မှာမှတ်သားသီချင်းစာရင်းများ, ဖန်တီးရန်ဒေသဖွင့်လှစ်ရန်။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Explorer ကို" နှင့်ဖိုင် / M4A ဖိုင်တွေမှ navigate ။
မီဒီယာ windose ဟာသိသိသာသာဧရိယာထဲမှာဖိုင်တွဲအနေဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအဖိုင်ကိုဆွဲယူပါ။
ထိုအခါကစားသမားထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏ဗဟိုပြဇာတ် button ကိုနှိပ်, အဲဒီနောက်လမ်းကြောင်းကစားစတင်ပါလိမ့်မည်။
ဆက်စပ်မီနူးကိုသုံးပါ - မီဒီယာ windose ဖို့ extension ကို M4A နှင့်အတူဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သငျသညျကို run ချင်သောဖိုင်ပေါ်တွင် Right-click နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဆက်စပ် menu ကိုဖွင့်ပါ။
ပေါ်လာသော Menu ထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ပွင့်လင်းမှုနှင့်အတူ", ပြီးသားကိုတွေ့ထားပြီးဘယ် "Windows Media Player ကို" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Player ကို, စတင်သည်ကစားပါလိမ့်မည်သည့်နှင့် M4A ။
အသေးစားဘဝ hacking: ကထဲမှာဖော်ပြပါတယ်လျှင်သင်, M4A အသံ-in ကိုမဆိုအခြားမီဒီယာကစားသမားကစားနိုင်ပါတယ်တူညီသောလမ်း "ပွင့်လင်းမှုနှင့်အတူ".
အဆိုပါ WMP အတွက်ချို့တဲ့, alas, ကောင်းမှုကုသိုလ်ထက်ပို - ထောက်ခံကို formats ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်, level ကိုမြေပြင်နှင့်အခြားအစီအစဉ်များကိုသုံးစွဲဖို့အများကြီးအသုံးပြုသူများကိုအတင်းအကျပ်စုစုပေါင်း obsolescence အပေါ်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။
M4A - သူ၏ဇာတိက Apple ထုတ်ကုန်ထဲမှာမသာလူကြိုက်များ format နဲ့။ သခင်ဘုရားနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်နိုင်ကြခြင်းနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးကစားသမားများထံမှအထိများစွာသောအခြားအစီအစဉ်များ, နှင့်ပြီးစနစ်က Windows Media Player ကိုဖြစ်ကြသည်။
ဗီဒီယို Watch: Hide Folders . RePack (အောက်တိုဘာလ 2019).